Casriyaynta aad casriga ah iyo kori sallaan phone-silsilad waxay ku saabsan tahay cadhoodaan maalmahan. Marka aad isticmaali telefoonka muddo ah, dhammaan xogta aad u qaali ah uu u ururay in ay xasuusta in sanduuq wuxuu maalka xogta dalwaddii ka dhigaa. Hawsha ugu weyn waagu idinku kor ka dib markii aad go'aansato in aad bedesho telefoonka ka duwan yahay, sida loo ka smartphone jir qaataan khasnad in aad la mid cusub.
Dardargelisay nidaamka Windows phone socda Windows 8 nidaamka qalliinka yimaado la gmail ugu wanaagsan-raadinta iyo muuqaalada rajo leh. Haddii aad ku talajirto in ay beddelaan ka hore smartphone Blackberry in a dhaldhalaalaan phone cusub Windows, aad go'aan ka caqli leh. Si kastaba ha ahaatee, sida kor ku wada hadleen, arrinta ugu weyn ee in aad la kulmi kartid ka dib markii aad go'aan ku saabsan tahay xogta ka Blackberry gudbaayo cusub Windows 8 telefoonka. Maqaalkani waxa ujeedadiisu tahay in uu tirtiro dhididka in ka dhisnayd qarkeedii inay adiga oo lagu siinayo sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xogta, iyo in sidoo kale si bilaash ah.
Marka la eego hoos ku jira habab lagu talinayo yar oo aad kala socon kartaa in aad ka Blackberry in phone Windows qaadan xogta aad:
• Isticmaalka Transfer ee My Data App
Ku dhowaad dhammaan casriga ah Windows leeyihiin app ka dhisay-in magacaabay 'Bedelka My Data'. Haddii aad telefoonka uusan haysan app, aad ka soo dejisan kartaa Windows Store lacag la'aan ah. App waxa uu safarka ka mid ah wareejinta xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah oo degdeg ah oo ka kaaftoomi-free. Iyadoo 'Bedelka My Data' aad si fudud ku wareejin karaa xogta ka hore smartphone Blackberry in aad telefoon Windows isticmaalaya Bluetooth. Version ugu dambeeyey ee app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nuqul ka xiriirada, iyo ku daro taageerada ballaaran ee suuqa kala iibsiga ee fariimaha qoraalka ah. Intaa waxaa dheer, version this sidoo kale taageertaa koobiyeynta ee files music ka qalabka Symbian iyo Taxanaha 40 Nokia xulay.
Si aad u dhaqaaqo xogta adiga oo isticmaalaya Transfer ee My Data app:
1. dhaqaajiso Bluetooth labada casriga ah.
2. telefoonka Windows, Oo Bilaabay Iibsiga My Data ka qaybta app shaashadda guriga ka.
3. Marka uu furmo suuqa app ka fura, tuubada Continue button.
4. Laga soo bilaabo qalabka Bluetooth heli karo, ka jaftaa in ay doortaan icon matalaya telefoonka aad Blackberry.
5. In uu furmo suuqa soo socda, hubi checkboxes matalaya xogta in aad rabto in lagu wareejiyo.
6. Marka la doortay, ka jaftaa button Start ku geeska bidix hoose.
7. Sug ilaa files xogta aad soo guuriyeen ka qalab Blackberry si aad u telefoonka Windows ka hor inta aanad bilaabin isticmaalka telefoonka cusub sida caadiga ah.
Fiiro gaar ah : Waxaad carqalad ku keeni karaan hanaanka wareejinta waqti kasta ee xunbo ah Stop button furmo Horumarka.
Sida wax soo saarka kale ama codsiyada leeyahay faa'iidooyinka iyo khasaaraha, Bedelka My Data sidoo kale yimaado oo la nooc gaar ah ee faa'iidada iyo khasaaraha.
1. app wuxuu kuu badbaadiyay kaaftoomi ee gacanta wareejinta xiriirrada iyo fariimaha qoraalka ah oo ka dhigaysa nidaamka oo dhan si degdeg ah.
2. Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada ee hal-click.
3. app ayaa imanaya sida barnaamij dhisay-in ugu telefoonada Windows, oo sidaas daraaddeed ma qalab kale oo dhinac saddexaad ayaa loo baahan yahay in la soo bixi.
1. Xitaa version ugu dambeeyey waxay siisaa fursadaha xadidan nooca xogta ah in aad ku wareejin karaa.
2. Taageerada loogu talagalay wareejinta files music iyo fariimaha qoraalka ah ee la heli karo tiro kooban oo qalabka.
3. hanaanka wareejinta ayaa qaadan kartaa lacagta Jashiisu yahay waqti dhammayn.
• By syncing Your Windows Phone la Windows / Mac
Si aad ugu badan uga telefoonka Windows iyo si loo hubiyo jiro mid ka mid ah xog muhiim ah oo aad ku kaydsan qalab Blackberry aad ka tagay, waxa ay bixisaa in ay xirmaan oo u hagaagsan waxa aad PC. Windows app The Phone lacag la'aan ah PC waxay ilmaha ku ciyaaraan, waayo, waxaad si ay u gudbiyaan xogta aad ka phone jir ah sida Blackberry in aad telefoon Windows ka dhigaa.
Hadii aad Mac PC ah halkii computer Windows-ku saleysan, waxaad isticmaali kartaa app Phone Windows codsiga Mac waa in si hufan loogu talagalay dadka isticmaala Mac.
Waxaad kala soo bixi kartaa arjiga ku habboon tahay qalab ka links siiyo:
Si aad u bilaabin isticmaalka app Phone Windows for Windows / Mac si ay u gudbiyaan xogta ka Blackberry in phone Windows ah, raac tilmaamaha hoose ku siiyey;
Tallaabada 01: xogta Transfer ka smartphone Blackberry:
Si aad u gudbiyaan xogta ay ka telefoonka aad Blackberry in aad Windows / Mac:
1. in aad Windows / Mac Connect telefoonka aad Blackberry la cable USB ah.
2. Marka xiran, double-riix Computer icon ka screen desktop-ka.
(Windows 7 halkan waxa loogu adeegsaday. Haddii aad isticmaalayso Windows 8 ama ka sarreeya nidaamka qalliinka, waa inaad tixgelisaa hab ku habboon in la furo dariishadaha Kombiyuutarka ah.)
3. Laga bilaabo suuqa kala furay, double-riix icon ku soo bandhigeen telefoonka aad Blackberry.
Fiiro gaar ah : Dadka isticmaala Mac, telefoonka dibadda ku xiran si aad u computer bandhigo sida gal gaar ah ku desktop laftiisa.
4. Marka uu furmo suuqa aad Blackberry ayaa kor u furmay, dooro files in aad rabto in lagu wareejiyo si aad telefoon Windows.
5. Ka dib markii files ayaa lagu soo xulay, xaq-riix mid ka mid ah faylka soo xulay.
6. macnaha guud ka menu soo bandhigay, riix Copy doorasho.
7. Haddii loo baahdo, la yareeyo suuqa kala furay, oo waxay dib ugu shaashadda desktop-ka, xaq-riix meel kasta oo ah goobta ku maran.
8. Ka menu xaaladda, riix paste doorasho waqtigan.
9. Marka files waxaa soo guuriyeen, barkinta qalab Blackberry aad ka Windows / Mac.
Tallaabada 02: xogta Transfer ka Windows / Mac in aad telefoon Windows.
1. Download version saxda ah ee Windows Phone app aad Windows / Mac ka links kor ku siiyo.
2. in qalab aad Connect telefoonka Windows la cable USB ah.
Fiiro gaar ah : Hubi in shaashadda aad telefoon waxaa quful marka aad u xidhmi doontaa PC.
3. Sug ilaa casriga ah uu ku xiran iyo furayey codsiga soo bixi.
4. Marka ay tani dhacdo, ka dhinaca kore ee midig ee suuqa, riix badhanka dar (la icon ah muujinayaa sida 'plus' calaamad).
5. Laga soo dooran karo sanduuqa furay, xaq-riix faylka (s) / folder (s) in aad rabto in lagu wareejiyo si aad telefoon.
6. Dooro dar ka menu macnaha guud.
7. Sug ilaa faylasha loo doortay wareejiyo telefoonka Windows ka hor inta aanad bilaabin isticmaalka casriga ah sida caadiga ah.
Tani waa hab nadiif ah iyo fududeeyey si ay u gudbiyaan xogta ay ka smartphone kasta (Blackberry sida halkan tusaale) si aad telefoon Windows. Codsiga ayaa ku soo beegmay iyada oo faa'iidada iyo khasaaraha labada.
1. Codsiga waxaa laga soo degsan kartaa Windows / Mac lacag la'aan ah.
2. Windows Phone app aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan files ka qalab labadaba dibadda iyo Windows / Mac.
3. ka phone Windows aad PC Waad wareejin kartaa files.
4. Habka Arintan waxay u sahlaysaa in aad sameysato koobi raad raac ah oo xogta lagu kaydiyaa aad casriga Blackberry ah.
5. interface nadiif ah oo si sahlan loo isticmaalo oo aad u ogolaanaya jidka ka kaaftoomi-free of faylasha aad wareejinta ah.
1. Waa in aad kala soo bixi codsiga dhinac saddexaad la odhan jiray Windows Phone app si ay u gudbiyaan faylasha aad.
2. Waxa lagaa rabaa inaad si uu tijaabada habka daalin ee ugu horeysay wareejinta files si aad PC, oo markaas iyaga u dhaqaaqo telefoonka.
> Resource > Transfer > Sida loo Demi Xogta laga Blackberry in Windows Phone